Diabetes – Page3– Healthy Life Journal
…၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊… Q. ဆီးချိုရောဂါကို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ကုသလို့ရပါသလား။ ဦးလွင်မြင့်၊ တွံတေး။ A. တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀၊ တစ်ပတ်မှာ မိနစ် ၁၅၀...